नोबल कपाल हटाउने उपकरणको कसरी प्रयोग गर्ने चरणहरूको बारेमा।-प्राविधिक जानकारी-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड।
नोबल कपाल हटाउने उपकरण को उपयोग कसरी चरणहरु को बारे मा।
नोबल एक निर्माता को रूप मा कपाल हटाउने उपकरण को अन्य प्रसिद्ध ब्रान्ड को सेवा गरीरहेको छ, को लागी यसको मुख्य उत्पादन लाई पनि हानी पुर्‍याएको छ। संचित अनुभवको बर्ष र पूरा उत्पाद आपूर्ति श्रृंखलाको कारणले, पूर्ण रूपमा नयाँ कपाल हटाउने उपकरण यस वर्ष मेमा सुरू गरिएको थियो। देखावटी एक हेयर ड्रायर जस्तै एक सुव्यवस्थित शरीर ग्रहण, उत्तम उपस्थिति मा एक युवा जीवन शक्ति संग। टोरोइडल कूलि area एरिया डिजाईनले तपाईंको बर्फीलो भावनालाई चौफेर तरीकामा बृद्धि गर्दछ, ताकि तपाईं तातो गर्मीमा कपाल हटाउनको मजा लिन सक्नुहुनेछ। डबल गर्मी लंपटता हिमपात भावना को प्रभाव लाई समेकित गर्न सक्छन्। नोबल कम्पनीको बारेमा यति धेरै जानकारी पछि, मलाई यो कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्ने विशिष्ट चरणहरू परिचय गराउँनुहोस्।
प्रयोग गर्नु अघि तयारी:
१. उपकरण प्रयोग गर्नु अघि कृपया क्षेत्रमा कपाल हटाउन शेभिंग प्रयोग गर्नुहोस् जुन हटाउनु पर्ने हुन्छ
यदि भर्खरकोमा (बितेको हप्तामा) तपाईंले कपाल हटाउने विधि शारीरिक रूपमा कपाललाई माथि उठाउनु भयो भने, तपाईं दाह्री नखोल्ने त झिक्न सक्नुहुन्छ।
कृपया नोट गर्नुहोस् कि यदि छालाको सतहमा कपाल सफा गरिएको छैन भने, यसले विकिरणको क्रममा प्रतिकूल परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ:
१) कपालको धूलोले प्रकाश उर्जाको केही अंश लिन सक्दछ, गम्भीर दुखाइ र रातोपन निम्त्याउँछ
२) छालामा कपाल जलाउन सकिन्छ, जसले छालालाई गम्भीर रूपमा जलाउन सक्छ।
२. छाला कपालविहीन, सुख्खा र तेलयुक्त पदार्थहरू नभएको सुनिश्चित गर्नका लागि छाला राम्ररी सफा गर्नुहोस्
Check. जाँच गर्नुहोस् कि इन्स्ट्रुमेन्ट बॉडी र लाइट आउटपुट सफा छ कि छैन। यदि कुनै धुलो वा कपाल छ भने, कृपया तिनीहरूलाई सफा गर्नुहोस्
The. छाला टोन कन्ट्रास्ट कार्डमा सन्दर्भ गर्नुहोस् र प्रकाश गहनता छनौट गर्नुहोस् जुन तपाइँको छालाको रंगलाई मिल्दछ।
प्रयोगका लागि चरणहरू:
१. विद्युत आपूर्ति जोड्नुहोस्; विद्युत आपूर्ति सुख्खा र अनावश्यक छ कि छैन भनेर जाँच गरिसकेपछि विद्युत आपूर्तिलाई जोड्नुहोस्। यो जडान भएको बेला सूचक प्रकाश उज्यालो हुनेछ, र त्यसपछि प्रकाश बन्द हुनेछ, जसले संकेत गर्दछ कि उपकरण सफलतापूर्वक पावर भयो।
२. सेकेन्डको लागि पावर बटनमा लामो प्रेस गर्नुहोस्। यस समयमा, उपकरण सुरू हुन्छ र आन्तरिक कूलि system प्रणाली सिnch्क्रोनाइज हुनेछ। यदि त्यहाँ कुनै अर्को चरण छैन भने, यो स्वचालित रूपमा minutes मिनेट पछि बन्द हुनेछ।
Suitable. उपयुक्त प्रकाश गहनता छनौट गर्नुहोस् र प्रकाश पाउन प्रयास गर्नुहोस्। यदि तपाईं अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया प्रकाशको तीव्रता बढाउनुहोस्। जति तीव्रता छ, कपाल हटाउने राम्रो प्रभाव।
Strong. आँखालाई कडा उज्यालोले क्षति हुनबाट बचाउनको लागि चश्मा लगाउनुहोस्।
Lighting. प्रकाशको लागि छालाको नजिकै, करीव २- times चोटि सम्पूर्ण शरीर सार्न सुझाव दिइन्छ। बारम्बार उही क्षेत्रलाई विकिरण नगर्नुहोस्, छालामा जलेको खतरा छ।
The. कपाल हटाउन समाप्त भएपछि, उपकरण बन्द गर्न पावर बटनमा लामो थिच्नुहोस्। केवल त्यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट रहन दिनुहोस्, र प्रणाली स्वचालित रूपमा शीत नहुन्जेल कुर्नुहोस्। पावर एडेप्टर अनप्लग गर्नुहोस्।
प्रयोग पछि छाला हेरचाह:
१. यदि विकिरण पछि छाला रातो छ भने। चिसोमा कम्प्रेस गर्नको लागि चिसो प्याक वा भिजेको तौंली प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि माउस्चराइज गर्नुहोस्।
२. कपाल हटाउने क्षेत्रमा अत्तर, मास्क र श्रृंगार सामग्री प्रयोग नगर्नुहोस्
Hair. २ hair-3 घण्टा कपाल हटाउने पछि, UV एक्सपोजरबाट बच्नुहोस्, कृपया सनस्क्रीनमा ध्यान दिनुहोस्।
वास्तवमा, नोबलले उत्पादन गरेको कपाल हटाउने उपकरणका लागि मात्र होइन, यो प्रक्रिया बुझेर परिचित भएपछि, बजारमा प्राय: कपाल हटाउने यन्त्रहरू त्यस्ता विनिर्देशहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंको आफ्नै प्रयोगको सुरक्षा र कपाल हटाउने प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न, म पनि आशा गर्दछु कि तपाईंले कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्न यो प्रक्रिया अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, म चाहन्छु कि तपाईं सकेसम्म चाँडो कपालको समस्याबाट छुटकारा पाउनुहुनेछ।
अघिल्लो: घरमा प्रयोग गर्न योग्य उपकरण पठाउन सकीन्छ स्थायी रूपमा
अर्को: घर कपाल हटाउने उपकरण शरीर को लागी अधिक हानिकारक छ